डा. राजेन्द्र भद्रा - Saptahik Magazine
कुनै व्यक्तिसँग पनि यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भड्ड हुनु हो । केटी (महिला) का लागि कुमारीत्व र केटा (पुरुष) का लागि कुमारत्व शारीरिक कुरा मात्र होइन, भावनात्मक पनि हो ।
टेस्टेस्टेरोनको कमी र यसको उपचार
टेस्टोस्टेरोन हाम्रो यौनेच्छा सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने हार्मोन हो । टेस्टेस्टेरोनको कमी हुँदा के–कस्ता लक्षण देखिन्छन् त ? व्यक्तिअनुसार टेस्टस्टेरोनको मात्रा फरक हुन्छ । यसमा थाइराइड ग्रन्थिको कार्य, प्रोटिनको स्थिति तथा अन्य कुराले प्रभाव पार्छ । टेस्टोस्टेरोन मात्रा १८–१९ वर्षको उमेरमा उच्च हुन्छ र त्यसपछि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
प्राय: सबैजसो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको कुनै बेला वीर्य स्खलन चाँडो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । योनिमा घर्षण नै गर्न नपाई योनिमा लिंग छिराउनासाथ वा छिराउनुभन्दा अघि नै वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो ।
म अविवाहित पुरुष हुँ । मेरो लिंगको अगाडिको भाग र छालामा स–साना डल्ला (बिमिरा) आएको छ । डाक्टरसँगको जाँचपछि Cloben-G नामक क्रिम लगाएको थिएँ, तर निको भएन । यसका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले विवाह गर्नुभन्दा पहिले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा यसो गर्दा सजिलै यौनआनन्द पाउन सकिने कुरा पक्कै पनि सिक्नुभएको हुनुपर्छ । तपाईंले विवाहभन्दा पहिले हस्तमैथुन गर्ने क्रममा यौन चरम सुखसम्म पुग्न सिक्नुभएको कुराभन्दा श्रीमतीसँगको यौनसम्पर्क त फरक पर्ने गर्छ ।
लिंगको नाप र यौनसुख
कुनै पनि व्यक्तिले यौन चरमसुख पाउने कुरा उसको शारीरिक पक्षका साथै मानसिक पक्षसंग अन्तरंग सम्बन्ध राख्छ । यौनसुख प्राप्त गर्न सो व्यक्ति मानसिक रूपमा नै तयार हुनु जरुरी छ र उत्तेजनाका सन्देश उसले शारीरिक रूपमा प्राप्त गर्न बाह्य कुराले सहयोग गर्ने हो ।
सामान्यभन्दा बढी समयसम्म तथा सो पनि निकै जोडदार रूपमा यौनसम्पर्क गर्दा लिंगमा जलन वा पीडाको अनुभव हुनसक्छ । धेरै लामो समयसम्म लिंग उत्तेजित भइरहेको अवस्थामा पनि लिंगमा पीडाको अनुभव हुनसक्छ ।
मद्यपान र यौनको विशेष सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ । मद्यपानले आफूलाई केही खुकुलोपन र सहजताको अनुभव गर्ने कुरा महिला तथा पुरुषहरू बताउँछन् । मद्यपानले यौनचाहना वा कार्य सक्षमतामा सकारात्मक असर गर्छ भन्ने कुरा सोच्छन् । कुनै पनि स्थिति जसमा यौन सक्षमतामा प्रश्नचिह्न उठ्ने शंका छ भने उनीहरूले मद्यपानको सहारा लिन पुग्छन् ।